Iindaba-Isanti kunye nenkqubo yemveliso yegrabile
Isanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye ngumjikelezo wemveliso ejikelezayo edibanisa umgca wemveliso yesanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye, enokuvelisa isanti kunye nelitye ngexesha elinye. Iseti epheleleyo yezixhobo zesanti kunye nelayini yelitye yimveliso yokudibanisa izixhobo ezijolise kwimveliso yesanti kunye nelitye lokwakha. Ingenza zonke iintlobo zelitye, ilitye lesinyithi, ilitye lekalika, ibasalt, igranite, ilitye, ilitye lomlambo, njl.njl. ngeemfuno zokwakha kunesanti yendalo kunye nelitye, kwaye unokuphucula umgangatho wokwakha.
Ngokweyantlukwano yobulukhuni be-ore, isanti kunye nelayini yokuveliswa kwelitye yahlulwe yangumqatha wentlabathi owaphukileyo kunye nelayini yemveliso yelitye (ubunzima be-Mohs bungaphezulu kwe-6) kunye nomgangatho wokuqala wentlabathi owaphukileyo kunye nelitye.
Inkqubo yesanti yesibini kunye nelayini yemveliso yegrabile iphantse ilandelayo: iinkcukacha ezahlukeneyo. Oomatshini badityaniswe kukuhambisa ibhanti, kwaye isanti egqityiweyo kunye negrabile yeenkcukacha ezahlukeneyo ziveliswa ngasemva kwescreen sokungcangcazela.
I-ore enkulu ithunyelwa ngokulinganayo kwi-crusher yomhlathi ukuze ityunyuzwe irabor ngumondli oshukuma. Izinto ezirhabaxa ezaphukileyo zithunyelwa kwisityumzi sempembelelo zokutyumza kunye nokubumba kukuhambisa ibhanti, emva koko zisiwe kwiscreen sokungcangcazela ukuhlolwa. Izinto ezihlangabezana neemfuno zobungakanani bamasuntswana emveliso egqityiweyo zithunyelwa kwindawo egqityiweyo yemveliso (ilitye) okanye ivili le-emele lesanti lokucoca, Emva kokucoca, imveliso egqityiweyo yimveliso yebhanti yokuhambisa imveliso egqityiweyo, eyimveliso egqityiweyo ngesanti eyenziwe ngomatshini; Kukho isanti entle elahlekileyo kumanzi amdaka akhutshwa ngumatshini wokuhlamba isanti. Umatshini wokubuyisela isanti ocwangcisiweyo ugcinwe ekugqibeleni ukubuyisela isanti entle (inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo linokufikelela ngaphezulu kwe-90%), kwaye isanti entle efunyenweyo ingahanjiswa iye kwindawo egqityiweyo yomatshini eyenziwe ngesanti ngomatshini owenziwe ngomatshini ibhanti; Emva kokuhluzwa, izixhobo (iibhloko ezinkulu) ezingadibaniyo neemfuno zamasuntswana emveliso egqityiweyo zibuyisiwe ukusuka kwiscreen sokungcangcazela ukuya kumatshini wokwenza isanti ukwenza kwakhona, ukwenza imijikelezo emininzi evaliweyo. I-granularity yeemveliso ezigqityiweyo zinokudityaniswa kwaye zihlelwe ngokweemfuno zabasebenzisi. Ukuba inkqubo yemveliso eyomileyo ikhethiwe, isixa esirhabaxa nesolumkileyo somgubo kunye nezixhobo zokususa uthuli zinokuxhotyiswa.
Inkqubo yokuprinta isanti kunye nelayini yamatye okuvelisa ngoku kulandelayo: (isisele) - isidlidlizi esondlayo-isando esinzima isityumzi -isetyhula eshukumayo yesikrini- umatshini wokwenza isanti- ivili lebhakethi lesanti- isher-reclaimer yesanti- iimveliso zeenkcukacha ezahlukeneyo. Oomatshini badityaniswe kukuhambisa ibhanti, kwaye isanti egqityiweyo kunye nelitye lezinto ezahlukeneyo ezichaziweyo ziveliswa ngasemva kwiscreen sokungcangcazela kwesetyhula.
I-ore eninzi ityiswa ngokulinganayo kwi-hammer isityumzi esindayo ngumondli oshukuma. Emva kokutyunyuzwa, izinto zithunyelwa kwisetyhula eshukuma isikrini ngumhambisi webhanti wokuvavanywa. Izinto ezihlangabezana neemfuno zobungakanani bamasuntswana emveliso egqityiweyo zithunyelwa kwindawo egqityiweyo yemveliso (ilitye) okanye ivili lebhakethi lesanti lokucoca. Emva kokucoca, isanti eyenziwe ngomatshini egqityiweyo ihanjiswa iye kwindawo egqityiweyo yemveliso sisithwali sebhanti lesikhumba, Kukho isanti entle elahlekileyo kumanzi amdaka akhutshwa ngumatshini wokuhlamba isanti. Umatshini wokubuyisela isanti ocwangcisiweyo ugcinwe ekugqibeleni ukubuyisela isanti entle (inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo linokufikelela ngaphezulu kwe-90%), kwaye isanti entle efunyenweyo ingahanjiswa iye kwindawo egqityiweyo yomatshini eyenziwe ngesanti ngomatshini owenziwe ngomatshini ibhanti; Emva kokuhluzwa, izixhobo (iibhloko ezinkulu) ezingadibaniyo neemfuno zamasuntswana emveliso egqityiweyo zibuyisiwe ukusuka kwiscreen sokungcangcazela ukuya kumatshini wokwenza isanti ukwenza kwakhona, ukwenza imijikelezo emininzi evaliweyo. I-granularity yeemveliso ezigqityiweyo zinokudityaniswa kwaye zihlelwe ngokweemfuno zabasebenzisi. Ukuba inkqubo yemveliso eyomileyo ikhethiwe, isixa esirhabaxa nesolumkileyo somgubo kunye nezixhobo zokususa uthuli zinokuxhotyiswa.
Amandla aluncedo kumhlaba wentlabathi kunye nemveliso yegrabile
1. * ugcino lwamandla nokhuselo lokusingqongileyo. Isanti kunye nomgca wemveliso yegrabile zinezibonelelo zokuzenzekelayo okuphezulu, iindleko zokusebenza eziphantsi, inqanaba lokutyunyuzwa okuphezulu, ukonga umbane, imveliso enkulu, ungcoliseko oluncinci kunye nolondolozo olulula. Isanti eyenziweyo ihlangabezana nomgangatho wesanti wolwakhiwo lukazwelonke. Imveliso inobungakanani beengqungquthela ezifanayo, ukuma kweengqungquthela ezilungileyo kunye nokuhlelwa ngokufanelekileyo.
2.Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo. Ukongeza kuqaliso, ukucima, ukondla kunye nolondolozo lwemihla ngemihla lwezixhobo, isanti kunye nomgca wemveliso yegrabile akufuneki ukuba usebenze ngesandla. Inezibonelelo zokusebenza kakuhle kwemveliso, iindleko zokusebenza eziphantsi, imveliso enkulu kunye nengeniso ephezulu. Ilitye eligqityiweyo linobungakanani be-particle size kunye ne-particle shape, ehlangabezana neemfuno zesizwe eziphezulu.
3. Ukusebenza ngokukuko. Kuyilo lokuhamba kwenkqubo, ngenxa yokuthelekiswa okufanelekileyo kwezixhobo zokutyhoboza kuwo onke amanqanaba kunye nokuma okungqongqo kwendawo yokuwela umnqamlezo, ineempawu zommandla omncinci, inzuzo ephezulu yoqoqosho, isanti elungileyo kunye nomgangatho wamatye kunye nezinga eliphantsi lokukhutshwa umgubo. Kwangelo xesha, ixhotyiswe ngenkqubo yokusebenza yolawulo lwe-elektroniki yokuqinisekisa ukukhutshwa okugudileyo, ukusebenza okuthembekileyo, ukusebenza okufanelekileyo kunye nokugcina amandla kuyo yonke le nkqubo.
4. Itekhnoloji ephucukileyo.